Iiphikseli zamva nje-iGeofumed
Agasti, 2012 egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ukuhambela eNicaragua ngomhlaba ... kudiniwe, kunye nenkampani GaiaGPS kunye nexesha elaneleyo lokudibanisa Uluhlu olumhlophe lwe-geofumadas Ngabaphi abafundi abathembekileyo kuphela abaya kuba nakho ukwazi kwezi kwiiveki ezi-2 ezizayo. Kuyathakazelisa ukuva kwiiprojekthi ezisebenzisa i-cadastre isebenzisa uGoogle Earth njengegalelo, eyonelisayo ukwabelana ngeephaneli ezikumgangatho ophezulu kakhulu, kulungile nokwazi ukuba bayayiqonda i-gvSIG njengesixhobo esisebenzayo, ukubuyisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-300 kwirhafu yezindlu kunye Uphuhliso loQoqosho lwaseKhaya lutyebile olwenziwe ngeeprojekthi zaphambi kotyalo mali.
Kodwa xa ubusuku buhamba, impumlo yamakhwenkwe ekhaya isikhumbuza ukuba sinobomi kwaye singaphili ixesha elincinci elingasayi kuphinda lifane, apha ndishiya iipikseli zeveki ephelileyo xa sasakha le projekthi yesayensi kwisizukulwane nentombi yam. wamandla omoya, o Ndiyakuthanda.
Apha kwikhadibhodi sibeka i-durapax kunye nephepha elishwabeneyo ngerabha, ukwenza umhlaba, okanye ukuze bangandithathi ngamabona-ndenzile, i-geomorphology yomhlaba ongaphantsi.
Emva koko saqhekeza ikhadibhodi yomphezulu, ndaxelela abafundi bam eManagua kwaye kwakunzima ukuba bandiqonde, emva kwengcaciso engekho ngqiqweni abathi bandixelele Ahhh, MDT!
Sele inyuselwe phezulu kubonakala ngathi yenziwe nge-gvSIG kwaye Sextant.
Ibhetri ye9 Volt yemayile ukuba ihambe kuba emva kwemizamo sibone ukuba umoya oveliswa ngabalandeli okanye owomileyo weenwele awonelanga, oko akuzange kuthathe impembelelo kuba ukutshintshela kule ntshukumo yemayile, i-dynamometer ithatha amandla Ukuya kwiibhulethi.
Sinee-tubs zangaphakathi ze-aluminium foil esizenzile iziseko, emva koko kubalandeli siye sagabha izinti zokhuni kwaye kwezi iipleyiti zepulasitiki ezazithatyathwe kumbala kaMalume Oto ukuba ngendlela egcinwe uthuli kuba utatomkhulu wayesaphila.
Zonke ezinye zaxazululwa ngepeyinti ye-acrylic kunye nekofu yokuqinisekisa emva kwemini esele ihambile.
Kwaye unyamezele ngomonde nge-silicone ebonakala ngathi inamathele kodwa ikopishe kwaye iqiniseke ukuba bahlala kwiidigri ze-60 ezifanelekileyo ukuze iinzame zokuzigcina zirhabaxa zincinci.
Xa sele igqityiwe, ichibi elincinci linokubonwa, umlambo owela kwimpompo ekupheleni kunye nezinye izityalo kwindawo ethe tyaba. Phantse njengoko kunjalo Geopack.
Ukuvula ukutshintshela kusebenze abalandeli, kwaye emva kwethuba lokujika unokubona izibane zezindlu zikhanyisela isibane esibangelwe yifafomitha.
Ikhadibhodi, ucingo, iziseko zemayile, upende ... okuseleyo ngaphaya
Abalandeli ababini, iUS $ 15
Isitshintshi, iUS $ 3
Iibhetri ezimbini ze-9 volt, i-US $ 5
Iibhulebhu zokukhanya, U $ 1.50
Isiphumo: Indawo yokuqala kwiBanga leSine, umgqatswa kulungelelwaniso lwezifundo.
Ixesha: Iiyure ezimbini ngoMgqibelo kwaye enye ngeCawa kwindawo ebalulekileyo yombhali weGeofumadas.
Kodwa kukho izinto ... ezixabisekileyo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-GPS kunye neGoogle Earth ngokuBambisana
Post Next Indlela yokulayisha iifayile ezinkulu kwi-Google DrayivuOkulandelayo »
Phendula kwi "Pixels zamva nje"
Yelba Flores Meza uthi:
Xa abantu bekuthanda abathe banegalelo elininzi ekucaciseni abo bengezozobuchwephesha kwicandelo labo lobungcaphephe lokusondela eluntwini, kundibangela umdla kakhulu. Kubi kakhulu ndingazi ukuba useNicaragua yam. Ezi ndaba kufuneka zipapashwe kwiindawo ezivulekileyo kunezo zeGeodey kunye neKhathuni. Kukho iphepha lolwazi kule ndawo apho ziingcali kwimicimbi yendalo esihlala sisebenzisa i-GIS kwaye sifuna isikhokelo sakho. http://espanol.groups.yahoo.com/group/MEL-Info/, ukuba ubuyela eNicaraguita yam.
Enkosi ngokupapasha intombi yakho iprojekthi kunye nemincwabo. Kuhle ukwazi ukuba ungusosayensi kunye nexesha lokujongana nesayensi kunye nosapho. Umzekelo omkhulu.